“မောင်လေးချစ်တဲ့ မမ”… ဇာတ်လမ်းလေးထဲက Brooklyn Beckham နဲ့ Lexy Panterra
On June 13, 2018 June 13, 2018 By Aminnyar
Brooklyn Beckham ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ ကမ္ဘာကျော် စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်တဲ့ David Beckham နဲ့ Victoria တို့ရဲ့ သားကြီး သြရသဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားလို့ ထင်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ သူ့အဖေလိုပဲ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီတစ်ခိုင် ဖြစ်နေခဲ့ပြန်တယ် ဆိုတာကိုလည်း သိပြီးသားပဲလို့ ထင်မိသေးတာပါပဲ။
တချို့ကတော့ ပြောချင်ပြောကြလိမ့်မယ်။ အလကားပါ။ မိဘအရှိန်ကြောင့်ပါ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် ‘စန်းပွင့်တယ်’ လို့ ပြောချင်ပြောနိုင်တဲ့ အဲဒီအကျိုးပေးဟာ ယောကျာ်းလေးတိုင်းမှာ မရှိတာတော့ အမှန်ပါ။
အခုတော့ သူဟာ အသက် ၁၉ နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ မိန်းကလေးတွေကြားထဲမှာ စန်းပွင့်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပီပီ ရည်းစားတွေလည်း အထိုက်အလျောက်တော့ ထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ လက်ရှိအချိန်မှာ သူတွဲနေတဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကတော့ YouTube မှာ star တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ Lexy Panterra ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ Panterra ဟာ သက်တူရွယ်တူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ Panterra က အသက် ၂၉ နှစ်မို့ Brooklyn ထက် ဆယ်နှစ်တိတိ ကြီးနေပါတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို နာမည်ပေးရရင် “မမရဲ့ မောင်လေး” ပေါ့လေ။
A perfect night ??? #SoGood
သူတို့တွဲနေကြတာ လွန်ခဲ့တဲ့ လတွေကတည်းကလို့ ဆိုကြပေမယ့် အားလုံး သေချာသိသွားကြရတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်လောက်ကမှပါပဲ။ Panterra က Brooklyn နဲ့ နှစ်ယောက်တွဲပြီး ကြည်နူးပုံကို သူမရဲ့ Instagram account ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒါတောင် သူမက တချို့တွေ မမြင်နိုင်တဲ့နည်းကို သုံးပြီးတင်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေပါသေးတယ်။)
အခု အဲဒီပုံနဲ့ သတင်းဟာ ကိုဖိုးစွံလေးဖြစ်တဲ့ Brooklyn နဲ့ တခြား Lexi တစ်ယောက်လို့ ပြောရင်ရနိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ Los Angeles က Tattoo ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ နမ်းနေကြတဲ့ ပုံတွေထွက်လာပြီးနောက် နှစ်လအကြာမှာ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီ တခြား Lexi တစ်ယောက်ဆိုတာဟာ Playboy က မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Lexi Wood ပါပဲ။
နောက်ပြီး Brooklyn ဟာ အခု မမ Panterra နဲ့ မတွဲခင်လေးမှာပဲ သူ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ မော်ဒယ်ကောင်မလေး Chloe Grace Moretz နဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ဒီနှစ်ဦးပိုင်းထဲမှာ တစ်ခန်းရပ်ခဲ့တာလို့ သိရပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မေလလောက်ကျမှ မမ Panterra နဲ့ New York မြို့ထဲမှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တွဲသွားတွဲလာတွေ လုပ်နေခဲ့တာပါလို့ မီဒီယာတွေက ပြောကြပါတယ်။
Brooklyn Beckham & Chloe Moretz | Source: Hollywood Life
ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတဲ့ Brooklyn ဟာ New York မြို့က Parsons School of Design ဆိုတဲ့ ကျောင်းမှာ ပညာသင်ကြားနေတာပါ။ မမ Panterra ကတော့ Los Angeles မှာ နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူဘဝလေးဟာ LDRS လို့ ပြောနိုင်တဲ့ အဝေးရောက်ချစ်သူတွေ ဘဝမျိုးပေါ့။
လောလောဆယ် အခြေအနေမှာတော့ Brooklyn နဲ့ Panterra တို့ရဲ့ RS အသစ်လေးနောက်မှာ စူးစမ်းချင်စရာ ကောင်းတာတစ်ခုလည်း ရှိသေးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Brooklyn ဟာ သူ့ရဲ့ Instagram ပေါ်မှာ သူကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ သူ့ချစ်သူဟောင်း Moretz ရဲ့ ပုံတွေကို ခုထိ မဖျက်သေးတာပါဘဲ။ အဲဒီပုံတွေကတော့ကို သူနဲ့ Moretz တို့ရဲ့ Valentine နေ့ အမှတ်တရ ညစာစားနေကြတဲ့ ရိုက်ချက်တွေရယ် Moretz ရဲ့ ၂၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် ဓာတ်ပုံလေးရယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ပုံလေးမှာ Brooklyn က Moretz ကို ရည်ရွယ်ပြီး….
Happy Birthday Baby. Love you to the moon and back xx …. ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။
Happy birthday baby ? love you to the moon and back xx
Moretz နဲ့တုန်းကလည်း မမနဲ့ မောင်လေး ဇာတ်လမ်းကို ရေးခဲ့တဲ့ Brooklyn ဟာ အခု နောက်ထပ် မမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မမ Panterra နဲ့ရော ဘယ်လိုလာဦးမလဲ။ အဲဒီနောက်ဆက်တွဲကို တော်တော်များများက စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြဦးမှာ အသေအချာပါပဲလို့ ထင်မိပါတော့တယ်။ ။
PREVIOUS POST Previous post: Gwen Stefani ကို စင်ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြီး သီချင်းတွဲဆိုရင်း ပရိသတ်တွေကို အံ့သြပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ Pink
NEXT POST Next post: Sugarland နဲ့အတူ အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Taylor Swift